SARCOIDOSIS पेटेंटहरूको लागि वैकनिक विज्ञापन
यस पृष्ठको सल्लाह सरकोडोसिसके द्वारा लेखिएको छ। सोरकोडोस रोगीहरूलाई फ्लू र निमोनियाका टीकाको बारेमा बढी बुझ्न मद्दत गर्न नर्स। जानकारीले तपाईंको निर्णयलाई सूचित गर्नेछ कि के भ्याक्सिनको लागी र यो कसरी बनाउने भन्ने बारे जानकारी दिन्छ। यदि तपाईं क्याकोसेन्सको बारेमा सरकोडोसिसयू न्युज मद्दतलाइनसँग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ, वा वास्तवमा तपाइँसँग कुनै अन्य प्रश्नहरू छन्, कृपया सम्पर्कमा जानुहोस्.
यस वर्ष उपलब्ध तीन फ्लू भिजिन्सहरू छन् तर सरकोडोसिससँग सम्भवतः दुईवटा सम्भावनाहरू छन्:
उत्तीर्ण त्रिभुवन फ्लू टीका (एटीआई)। यो 65 वर्ष वा माथिका व्यक्तिहरूको लागि इजाजतपत्र दिइएको छ।
Quadrivalent vaccine (QIV)। यो6महिना देखि2वर्ष उमेरका बच्चाहरु लाई सिफारिस गरिन्छ र 65 वर्ष भन्दा कम उमेरका वयस्कों मा, जसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य अवस्था (क्लिनिक जोखिम समूह) को कारण फ्लूबाट बढेको जोखिममा छ।
फ्लू टीकाहरू खोपहरू जीवित छैनन् र यसैले तपाइँलाई फ्लू दिन सक्दैन, यद्यपि तपाइँ पछि केही अन्धकार महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ छ कि तिनीहरू रोगीहरूमा प्रयोग गर्न सुरक्षित छन् जो प्रतिरक्षा दमन औषधि लिइरहेछन् जस्तै भविष्यवाणी को लागि। यसबाहेक यो क्यासिनो सामान्यतया सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको सिफारिस गरिन्छ जुन प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका छन् र अधिक सम्भावित छन्:
एक गंभीर संक्रमण अनुबंध गर्नुहोस्
संक्रमणबाट पुनःप्राप्ति गर्न थप समय लिनुहोस्
निम्न मान्छे को एनएचएस मा नि: शुल्क फ्लू टीका को पेशकश को पेशकश गरिन्छ:
65 वर्ष भन्दा बढी उमेरको।
पुरानो श्वसन, हृदय, जिगर, गुर्दे वा न्यूरोलोजिकल रोग (क्लिनिक जोखिम समूह) को साथ।
स्टेरॉइड ट्याब्लेटको परिणामको रूपमा कमजोर गरीएको प्रतिरक्षा प्रणालीको साथ जो कोही।
तर sarcoidosis एक दुर्लभ रोग हो र हो होइन जरूरी नै एक नैदानिक जोखिम समूह को रूप मा वर्गीकृत। यसबाहेक फ्लू टीकाको उपलब्धता बेलायतीका विभिन्न भागहरूमा भिन्न हुन्छ। त्यसैले तपाईले तपाइँको जीपी बाट फ्लू टीकाकरण अनुरोध गर्न सक्दछ। उनले आफ्नो प्रशासनको बारेमा एक नैदानिक निर्णय गर्न सक्दछ र यो तपाईंको नोटहरूमा प्रविष्ट गरिसकेको छ।
यदि तपाइँसँग क्यारियर छ भने तिनीहरू नि: शुल्क फ्लूको टीकाकरणको लागि योग्य हुन सक्दछन्, भले ही उनि परिवारका सदस्य हुन्। कृपया तिनीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै GP लाई सोध्न प्रोत्साहन दिनुहोस्।
NHS निर्देशन पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् फ्लू टीकाको बारेमा।
सरकोडोस रोगीहरूले पनि निमोकोकोकल (PCV) संक्रमणहरूको विरुद्धमा एक टीकाकरणलाई विचार गर्नुपर्दछ। यो एक मात्र समयको टीकाकरण हो र तपाईले निमोनिया जस्ता जटिलताहरूको रक्षा गर्नेछ। फ्लू भिक्सीको रूपमा, पोनेमोकोस्कलको टीका पनि 65 वर्षको उमेरमा सबैको लागि मानकको रूपमा प्रस्तावित गरिन्छ र सामान्यतया दीर्घकालिक पुरानो अवस्थामा रोगीहरूलाई प्रदान गरिन्छ। तर sarcoidosis एक दुर्लभ रोग हो र हो होइन एक दीर्घकालिक पुरानो अवस्थाको रूपमा आवश्यक छ। त्यसैले तपाईले तपाइँको GP बाट निमोकोस्कोल टीकाकरणको अनुरोध गर्न सक्दछ.
निमोकोस्कोल टीकाको बारेमा NHS निर्देशन पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
SarcoidosisUK नर्स मद्दतलाइन अवस्थित कुनै पनि व्यक्तिलाई निःशुल्क, गुणस्तर समर्थन र जानकारी प्रदान गर्न अवस्थित छ।